केन्द्रबिन्दु संवाददाता २० कार्तिक २०७७
सार्कमा भारत लगायत अन्य मुलुकले कोरोना संक्रमण र निको हुने दरमा उल्लेख्य प्रगति गरिरहँदा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ। सार्क मुलुकमध्ये नेपालमा सबैभन्दा थोरै संक्रमित निको भएका छन्।
नेपालमा संक्रमितमध्ये ६७.१ प्रतिशत पुरुष छन्। महिला संक्रमितको संख्या ३२.९ प्रतिशत छ। महाशाखाका अनुसार सक्रिय संक्रमित २०.२ प्रतिशत छ। पीसीआर परीक्षणमध्ये संक्रमणदर १२.३ प्रतिशत छ। प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार पोजेटिभमध्ये मृत्युदर ०.६ प्रतिशत छ। जम्मा मृत्यु प्रति दश लाख (पोजेटिभमा) ३५.४ प्रतिशत छ।
३० हजार संक्रमित घरमै
कोरोना संक्रमितले होम (घर) आइसोलेसन र समयमै उपचार नपाएर पनि ज्यान गुमाएको पाइएको छ। ३० हजार १ सय ३१ जना घरमै आइसोलेसनमा बसेका छन्। आईसीयूमा ३ सय ७९ र भेन्टिलेटरमा ७८ जना उपचाररत छन्।
प्रवक्ता डा. गौतमले घरमै आइसोलेसनमा बसेकाहरूले स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श नलिएको बताए। ‘कोरोना संक्रमण निको भएकासँग सरसल्लाह गरी विभिन्न औषधि सेवन गरेको पाइएको छ’, उनले भने, ‘आइसोलेसनमा बसेका बेला तीन पटक ज्वरो र अक्सिजनको लेभल स्याचुरेसन नाप्नुपर्छ। यदि गाह्रो महसुस भए चिनेको चिकित्सक वा हटलाइनमा फोन गरी सहयोग लिनुपर्छ।’
मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमले पनि सबै कोभिड प्रयोगशाला सञ्चालन गरेका अस्पताल एवं मेडिकल कलेजले होम आइसोलेसनमा टेली कम्युनिकेसन, कन्सल्टेसन र काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। अस्पताल नभएका प्रयोगशालाले कुनै सरकारी वा निजी तवरबाट सञ्चालित अस्पतालसँग समन्वय गरी टेली कम्युनिकेसन, कन्सल्टेसन र काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै नेपाल प्रहरी अस्पताललाई ३ सय बेडको अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गरिएको डा. गौतमले बताए।अन्नपूर्णबाट
प्रकाशित: २० कार्तिक २०७७ ०७:३४ बिहीबार
नेप्से घटे पनि तामाकोसीका लगानीकर्ताले कमाए राम्रो नाफा
लुम्बिनी आउने विदेशी पर्यटक बढे : स्वदेशी घटे